Mirana : Nilalao fitiavana loatra, saika tsy nahita vady
Nandalo sedra mafy sy kely nahita fiainana i Mirana. Mbola tanora mantsy izy dia efa nahalala fitiavana ary mbola tsy feno taona ihany koa no nisedra hadisoam-panantenana ara-pitiavana voalohany indrindra teo amin'ny fiainana…
Tovovavy tsara endrika amam-bika, manam-pahaizana sy sahisahy i Mirana, ka toa nilalao ny hatanorany hatrany. Tao anatin'izay fotoana izay dia niovaova olon-tiana matetika izy. Mora foana taminy ny nanadino, na nisesisesy aza ny fisarahana tamin'ireo tovolahy maro niaraka taminy. Nony nandroso ny fotoana ka tsapany fa lasa nanambady avokoa ireo zanaky ny havany, izay nitovitovy taona taminy, dia nanomboka taitra izy ary naniry fiarahana matotra amin'izay.
Niova toetra, saingy…
Niova toetra i Mirana ary nanaraka fitondran-tena mendrika amin 'izay. Nikasa ny hiorina ara-pitiavana mansy izy ary naniry ny hanangana tokantrano. Tao anatin'ireo telo taona nahatonga saina azy anefa dia maty momoka avokoa ny fikasany ary ravarava ho azy avokoa ireo fiarahana sy tantaram-pitiavana niainany. Tao ireo tovolahy nianteherany sy nanankinany mafy ny fony, nefa efa nanan-tompo tany an-kafa. Tao ihany koa ireo ninia niala taminy, na koa tsy hita popoka, fa lasa tsy nampilaza. Fifandirana lava, hevitra tsy mitovy, na koa fitiavana feno fitaka no niainany tao anatin'ireo telo taona naniriany hanambady. Maro ihany koa ireo ninia nilalao ny fitiavany.
Nandeha ihany koa ny resa-be mahakasika ny fitondran-tenany ary tao mihitsy ireo nilaza fa lany zara noho ny ditra i Mirana, ka tsy hahita mangirana amin'ny resa-pitiavana intsony. Rah any vavan’ny mpitazana dia tsy ho vehivavy mendrika hisy hampakatra ho vady na oviana na oviana intsony izy. Lahatsoratra an-gazety kosa no nahitany ny laharan-taribin'i Mme Noellah, ilay vehivavy mpitsabo amin'ny alalan'ny herin'ny rano sy ny vavaka, mandrava ireo olana sarotra rehetra tsy antenaina hivaha intsony. Ireo laharan-tariby hitany tao anatin'ilay lahatsoratra an-gazety mirakitra fijoroana vavolombelona avy hatrany no nantsoiny ( 033 13 090 13/ 034 61 328 62 / 032 60 479 94), ka teo noho eo ihany izy dia nanatona ny birao fandraisan'i Mme Noellah eny 67 ha atsimo, ampitan'ny CECAM.
Nahita ny anjarany ihany
Nitaratra ny fiainan'i Mirana i Mme Noellah, ka teo no nahitany fa manana ny anjarany i Mirana eo amin'ny resaka fitiavana, saingy misy kosa ny olana misakana azy amin'izany, noho ny lasany. Tsy niraharaha vatana sy nanao izay saim-pantany rehetra tokoa mantsy ny tovovavy, ka nietry tao anatin'ireo fitondran-tena tsy mendrika ny hasina maha-olona azy sy ny vintany. Niroso tamin’ny vavaka sy fanadiovana ary fanarenana i Mme Noellah, ka telo andro taorian'izay monja dia tojo tovolahy mahafinaritra sy efa mahaleo tena i Mirana. Hotontosaina amin'ity herinandro ity ny fisehoana sy ny vodiondrin'ny tovovavy. Anisan'ny ananaran'i Mme Noellah ny tovovavy malagasy kosa ny resaka fitondran-tena tsy hanafintohina na hampitafy henatra ireo nahitana masoandro, fa indrindra tsy hanimba ny vatana, hanetry ny vintana, ka handoto ny fanahy maha-olona izay avy amin'Andriamanitra.